Andro: 7 Oktobra 2019
Ny famango-drano lehibe sy ny fiasan'ny sahan'ny Elmali Bus Terminal, izay hanorina ny Antalya Metropolitan Munisipaly dia nanomboka. Ny terminal, izay hiteraka ny herin'ny tenany amin'ny alàlan'ny takelaka solar, dia miaraka amin'ny lafiny tontolo iainana. Antalya Metropolitan kaominina ao Elmali vaovao [More ...]
Ireo bisy efa nijanona teo ambany fanaraha-mason'ny UKOM
Ny Centre Coordination Transportation (UKOM), naorina ao amin'ny departemantan'ny Kocaeli Metropolitan Municipality of Transportation and Management Management miaraka amin'ny fitaovana ara-teknolojia farany, miasa miaraka amin'ny fitsipiky ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny 7 / 24. Ny fakantsary napetraka amin'ny teboka manan-danja dia arahi-maso tsy tapaka ary fampandrenesana avy amin'ny olom-pirenena [More ...]
Tsy ho velona ny olan'ny Ormanya'da Park
Ilay valan-javaboahary voajanahary, izay mandray ireo vahiny maro avy any amin'ireo faritany mifanakaiky ao Kocaeli sy any ivelany, dia voasarika ny olona izay tsy manahy loatra ary maniry ny handany fotoana ao amin'ny natiora. Day ny firaisan-tsaina ary koa ny mpitsidika avy any Torkia sy izao tontolo izao Ormanian [More ...]
Ny ambanivohitra Kocaeli Metropolitan dia tsy manao ambanin-javatra ny famolavolana ireo faritra ireo amin'ny fambolena tany aorian'ny nahavitana tetikasa toa ny lalana, ny overlay ary ny làlan-kivoahana. Ny departemantan'i Park Garden sy Green dia nahavitany ny faritra maitso sy volontany miloko ho an'ny tetikasa [More ...]
Andro 15 nanomboka niditra birao… 14 Lalambe mankany Bursa mandritra ny fe-potoana. Tamin'ny resaka an-telefaona nifanaovana tamin'i Öner Özgür, izay mpikarakara ny faritra ary manompo ho mpitantana foibe miandraikitra ny famatsiam-bola amin'ny TCDD dia nanontany izahay: ca [More ...]
Ankehitriny, izay misy fiaran-dalamby haingam-pandeha, dia manohy miasa tsy an-kijanona i Shina ho an'ireo lamasinina maglev izay nampidirina ny prototype tato anatin'ny volana vitsivitsy. Amin'izany toe-javatra izany, ny fitsapana voalohany dia hatao amin'ny fanombohan'ny 2020. Sina dia firenena haingana be ho an'ny fitaterana lalamby i Chine [More ...]
Fiara Hautevam-pandeha avo lenta. Ny serivisy natolotry ny talen'ny jeneraly mifandraika sy tompon'andraikitry ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia nitombo 20. Ny fanazavana voalohany dia avy amin'ny Direction Générale d'Études. Lalambe, tetezana ary [More ...]
Avelao ny fanontaniana momba ny zava-nitranga tamin'ny tetikasa Kanal Istanbul tonga at me amiko izao! Ny filoha Recep Tayyip Erdogan dia nandidy an'i Kızılcıhamam'da. Nilaza izy ireo fa tsy hainao ny hanao ny Channel Istanbul, efa ela loatra io asa io. Ny tetikasa Channel İstanbul dia nasaina hanomboka avy hatrany. CHP mafy setra [More ...]
Ny solontenan'ireo efitrano misy ifandraisan'ny injeniera sy mpikaroka ao Sakarya, nihaona tamin'ny solontenan'ilay orinasa izay nanatanteraka ny tetik'asa ropeway tao Sapanca. Ny loka nandresy Bursa Cable Car [More ...]
Nisy felam-pitondrana natao ho fanesorana ireo lamasinina Marmaray amin'ny graffiti (sary hosodoko na hosoratana amin'ny entana amam-panjakana na toerana ho an'ny daholobe). TCDD Transportation Co. Ny fanambarana ny talen'ny Operation Marmaray tamin'ny Gazety ofisialy dia nilaza hoe: "serivisy fanaraha-maso ny fiara marmaray [More ...]
ARUS Misolo tena ny firenentsika ao amin'ny Ferroviara Rail Systems Fair
Mpikambana ao amin'ny biraon'ny talen'ny European Rail Systems Association (ERCI) Anatolian Rail Systems Cluster (ARUS) no nisolo tena ny firenentsika tany Ferroviara Rail Systems Fair natao tany Milan, Italia. Anadolu Rail Systems Cluster Coordinator Ilhami Pektas nilaza tamina fanambarana iray; Milano Italia Milano [More ...]
Ny ben'ny tanàna Güngör dia nilaza fa ny fiomanana amin'ny vanim-potoana dia mitohy any amin'ny Ivotoerana Ski Yedikuyular ary nanampy hoe: yerine Raha tokony ho fananganana sakafo sy fisotroana tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra, dia manangana trano fivarotana vaovao izahay izay hanome serivisy mendrika kokoa ho an'ny vahiny. Ankoatr'izay dia ny fampidirana vokatra eto an-toerana ao amin'ireo trano vaovaontsika vaovao [More ...]
Ny fiara hisorohana ny lozam-pifamoivoizana Metrobus dia hapetraka ny rafitra fampitandremana mialoha
Ny masoivoho Metropolitan Istanbul (IMM) dia nanao fanadihadiana mikasika ilay lozam-pifamoivoizana androany maraina. Manara-maso akaiky ny toetran'ny mpandeha 13 kely naratra. İETT, izay mitarika asa lehibe hisorohana ny lozam-pifamoivoizana toy izany, dia hametraka Uyarı Early Warning System a amin'ny fiara ihany koa. [More ...]